वाम एकता भाँड्न खोज्नु पार्टी सिध्याउने खेल | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / वाम एकता भाँड्न खोज्नु पार्टी सिध्याउने खेल
वाम एकता भाँड्न खोज्नु पार्टी सिध्याउने खेल
Posted by: युगबोध in विचार December 28, 2017	0 157 Views
बाच्नुको मजा दे ख्न पाउनु र सुन्न पाउनमा नै रहे छ । जिन्दगीमा के –के दे खियो , के –के सुनियो सबै वृत्तान्न लाउन न त संभव छ न त आवश्यक नै  । त्यसमा दे खे का र सुने कामा पनि आफूले भो गे का ज्यादै घतलाग्ने कुराहरुको सम्झना भने बढी हु“दो रहे छ । त्यसमा पनि सबै भो गाइ सबै लाई सुन्ने लायक कहा“ हुन्छन् र ? छो ड थाङ्ने कुरा भन्ने पनि त हुन्छन् । के ही यसमा विषय पनि छन् जो धे रै का भो गाइ हुन्छन् । ती सबै का लागि सुन्नलायक र घतलाग्दा हुन्छन् । आज यस ले खमा थाङ्ने कुरा बाहे क सबै लाई घत लाग्ने कुरा गरौ ं कि जस् तो लाग्यो  । त्यो हो चुनावकै कुरो  ।
वषौर् ं भयो म राजनीतिक मिटिङमा हु“दै न । त्यहा“ के –के खासखुस कुरा हुन्छन् त्यो पनि म चासो राख्दै न । तर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मे रो विशे ष रुचि छ । राष्ट्रिय राजनीति के लाउनु पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि त्यसै भित्र परिहाल्छ । जे हो स् कुरा चुनावकै हो  । जो कुरा म पनि भन्न गइरहे को छु त्यो चुनाउ अघि ले खे को भए सस् तो प्रचारवाजी पनि हुन जान्थ्यो  । त्यसै ले त्यस बे ला म चूप रहे ं । कुरा के छ भने चुनाउअघि भे ट हु“दा गम्किने साथीहरुले मलाई भन्थे – कृष्णबहादुर महरा दाङबाट चुनावमा उठ्ने रे के हो ह ? आफूलाई कत्ति पनि थाहा नभएको कुरामा के भन्ने ? के फुर्ति लाउने ?
तिनै ताका कति मित्रहरुले मलाई आश्चर्यको मुद्रामा सुनाउ“थे  । घो राही बजारको सबभन्दा भव्य दिव्य महल त कृष्णबहादुर महराको हो रे  । त्यस् तै दुई तीनवटा अरु दिव्य महल छन् ती पनि महराकै हुन् रे  । उता महरालाई मै ले रो ल्पाको विज्ञानको शिक्षकको रुपमा चिने को २०३३ सालदे खि हो  । उहा“ले रो ल्पाबाट समाचार पठाइदिने र मै ले युगवो धमा छाप्ने  । मे रो र उहा“को मित्रता त्यत्ति हो  । त्यो बे ला घो राहीमा एक दुई पटक भे ट भए हो ला । एउटा पत्रकारको उत्सुकताले जनयुद्धताका हापुरे वार्तामा उहा“स“ग भे ट भयो  । के –के कुरा भए सबै बिसेर् ं । बे लुकी आटो र सिस् नो को साग पहिलो पटक खा“दाको बे ला कसै ले दे खायो ऊ महराकी श्रीमती, परिवारै जनयुद्धमा हो मिएका रे  । यस् तै –यस् तै कुरा । बरु काठमाडौ ंमा १६ महिने सांसद बन्दा र चार वर्ष पे ्रस काउन्सिलमा बस् दा पटक–पटक भे ट हुन्थ्यो  । उहा“ले नबिर्सने गुन लगाउनुभयो दाङमा पत्रकार महासंघको भवन निर्माणमा । धे रै पटक हाम्रो प्रयास बिफल भएको थियो  । उहा“ले सञ्चारमन्त्री हु“दा ब्याविने टमा डिसिजन गराएर सरकारी जग्गा उपलव्ध गराउनुभयो र आज भव्य भवन खडा छ । त्यस् तै घो राही अस् पतालमा पनि उहा“को ठूलो आ“टिलो सहयो ग रह्यो  ।
यस् तै कुराले एकातिर महराजीलाई निको मान्ने मान्छे बढ्दै गए भने उहा“को इष्र्या गरे र घो राहीका तीन दरबारका मालिक महरा भने र पनि मानिसले बदनाम गरिरहे  । म जीब्रो टो के र चूपचाप रहे ं । आज यतिका दिनपछि भे द खो लें  । त्यो पनि चुनावकै प्रसंगमा । मे रो एउटा भो ट खे र नजाओ स् मलाई पनि लाग्यो  । मस“ग स् थानीय घाघडान कम्युनिष्टहरुस“ग प्रायः भेट हुन्न । भए पनि नमस् ते बाहे क के ही हुन्न । त्यो सबै औ पचारिकता हो  । तर मलाई चा“डै र चटारै प¥यो भने माओ वादी के न्द्रका दङाली ने ता निर्मल आचार्यस“ग गुनासो गनेर् बानी छ । फो नमा एकदिन कुरा भयो दाङमा चुनाउ जित्नु छ भने कृष्णबहादुर महरालाई ल्याउनपर्छ । नत्र हारिन्छ २ नं. क्षे त्र मात्र है न, सबै हारिन्छ । कृपया प्रचण्डजीलाई यो मे रो सन्दे श तुरुन्तै भनिदिनुस् । पछि निर्मलजीले मलाई आश्वस् त पादैर् भन्नुभयो – ‘यसमा सबै को सहमति भइसक्यो  ।’
सबै मतभे द हटे र चुनावी गठबन्धन मात्र है न, एमाले र माओ वादी के न्द्रले एउटै पार्टी बनाउने घो षणा गरे र नया“ आशाको माहो ल तयार भयो  । फलस् वरुप कम्युनिष्टको प्रचण्ड बहुमत हुन पुग्यो  । के पी ओ ली, प्रचण्डलगायतका ने ताहरुले बुझ्नुभयो – ने पालको समृद्धिको ढो का खो ल्ने हो भने एमाले र माओ वादी नमिली सुख छै न । कति सै द्धान्तिक झगडा मात्र गनेर् ? आखिर भयो त्यही । ने पालमा यस् ता अनौ ठा कुरा हु“दै आएका छन् । २०६२÷६३ को आन्दो लनको अघिसम्म संविधानसभाको चुनाव कतिका नजरमा असम्भव कल्पना थियो  । आखिर त्यो सम्भव भयो  । ने पालमा हामै ्र पालामा ने पालमा गणतन्त्र आउ“छ भने र त म पनि भन्न सक्दै नथे ं । तर व्यवस् थापकीय संसदमा गणतन्त्र घो षणा गनेर् अन्तरिम संविधानमा आफै ले दस् तखत गर्न पाइयो  ।
यसरी राजनीतिक लक्ष त पूरा भयो  । राज्यको पुनः संरचनामा स् थानीय सरकार, प्रादे शिक सरकार र के न्द्रीय सरकारको परिकल्पना पनि साकार भयो  । तर प्रश्न उठ्छ– गरिवीको रे खामुनिका जनताले के पाए ? प्राकृतिक सम्पदाको संसारको सम्पन्न दे शमध्ये को ने पाल हुनुपनेर् मा संसारको गरिव मुलुकमा पर्नुमा को दो षी ? सबै समयका सबै अगुवाहरु यसमा दो षी छन् । यिनीहरुले आफ्नो र आफ्नो परिवारको , आफ्ना नातागो ता र आफ्ना चाकरीवाजहरुको जीवन मात्रै सुधारे  । राष्ट्र तन्नम पारे  । राष्ट्र र जनतालाई असामी बनाए । अहिले पनि प्रत्ये क ने पालीको टाउको मा करिव १९ हजार ऋणको भारी छ ।
मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लै जाने संकल्पका साथ वाम एकताको घो षणाा त भयो  । विश्वासमा जनताले वाम गठबन्धनलाई मत पनि दिए । हताश प्रतिपक्षको ने तृत्व शे रबहादुर दे उवाले गरिराखे का छन् भने अकोर् तिर विजयको उन्माद चढ्ला कि जस् तो गनेर् थो रै दुई नम्बरी वाम ने ताहरु झस् के का पनि हो लान् र बखे डा झिक्छन् कि भन्ने खतरा पनि छ । म त दाङको कुनामा बसे को मान्छे  । दाङमा दुबै तिर संयम र धै र्य दे खिरहे को छु । जीतहारले को ही कतै बर्बराएको सुन्दै न । धे रै का भाषण र वक्तव्य पढ्छु, संयम र धै र्य अपनाउने ने ताहरुलाई धन्यवाद दिन मन लाग्छ । अब वक्तव्य र मन्तव्यले मात्र पुग्ने छै न । कसै ले पनि आफ्नो गन्तव्य बिर्सनु हुने छै न । ने ताहरुको गन्तव्य जनताबीच नै हो  ।
सा“च्चै भन्ने हो भने जनता पीडित छन् । जनतालाई पीडा दिने हरुमा को –को छन् भने र खो ज्न लाग्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले सबै लाई चिने का छन् । हामीले चिनाउनुपदैर् न । अहिले सम्म जनताले नया“ सुखद अनुभूति खासै गर्न पाएका छै नन् । त्यसै ले थो रै –थो रै ने ताहरुप्रति टिकाटिप्पणी शुरु भइसके को छ । नया“ जनप्रतिनिधिहरुले पुराना अपराधीहरुलाई टुलुटुलु हे रिरहनुभएको छ । न तिनीहरुको मन बदलिएर ठीक ठाउ“मा ल्याउन प्रायश्चित गराउन सक्नुभएको छ । न त तिनीहरुलाई तह लगाउन सक्नु भएको छ । त्यसले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।
आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र मर्यादा जो गाउ“दै कहा“ के गर्नुपनेर् हो , बो ल्नुपनेर् हो जस् ता कार्यक्रमहरु डायरीमा नो ट गरिहाल्नपनेर् है न र ? जनप्रतिनिधिको हावभाव, चे ष्टा, बो ली बचनले पनि अपराधीहरु तर्सियून् । त्यति त गर्न सकिन्छ । मै ले सुने अनुसार लाउके हरुको भनाइमा विश्वास गर्न थाले रे  । हो कि है न ? मसग प्रमाण छै न । संसारको इतिहास साक्षी छ । आखिरमा चाम प्यारो हुन्न, कामै प्यारो हुन्छ । ७५ वर्षसम्म सफल मानिएको सो भियतसंघ र चार सय वर्ष पुरानो
व्रिटिश साम्राज्यको पतन भयो  ।
झण्डै दुई सय वर्ष पुरानो भारतीय कांग्रे स लो प हो ला कि भन्ने अवस् थामा पुगे को छ । यता माओ को पहिलो शक्तिशाली दे श बन्ने तरखरमा छ चीन । ने पालमा कम्युनिष्टहरुले एकता गर्न जाने भने यो अजे य शक्ति पनि हुनसक्छ । लो भीपापीहरुको संगतमा बाटो बिराए भने भारतीय कम्युनिष्टहरुको जस् तै हालत हुनसक्छ । जुन विश्वासमा जनताले यति ठूलो मत दिए त्यसमा कसै ले घात नगरुन् ।
Previous: शैक्षिक मजदुरका जागिर अक्करनामाका जञ्जिर
Next: छक्याउन खोज्नेलाई झुक्याउँदै उपमहानगरपालिका